एउटै मुद्दामा उही न्यायाधीशको फरक आदेश, जनमुखी सहकारीका कर्मचारी पुर्पक्षमा, सञ्चालक धरौटीमा रिहा - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
एउटै मुद्दामा उही न्यायाधीशको फरक आदेश, जनमुखी सहकारीका कर्मचारी पुर्पक्षमा, सञ्चालक धरौटीमा रिहा
आवाज संवाददाता ६ श्रावण २०७३, बिहीबार
दोलखा, ६ साउन/प्रक्रिया नै नपु¥याई करोडौँ ऋण लगानी गरेको अभियोग लागेका काब्रेको जनमुखी वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका मुख्य सञ्चालकलाई जिल्ला अदालत दोलखाले जनही ५ लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको एकल इजालासले सहकारीका अध्यक्ष माधवप्रसाद दाहाल र सचिव कृष्णप्रसाद दाहाललाई बुधबार राती धरौटी लिई रिहा गरेको हो ।
प्रक्रिया बिना ऋण लगानी गरेको अभियोगमा कर्मचारी र ऋण उपसमितिका सदस्य पक्राउ परे तापनि सञ्चालकद्वय फरार थिए । उनीहरु बुधबार दिउँसो जिल्ला अदालत हाजिर भएर बयान दिएका थिए । अदालतले नियमित पेशी समेत हटाएर बुधवार दिउँसो नै बहस गराएको थियो । बहसपछि अदालतले राति साँढे ७ बजे धरौटी आदेश दिएको थियो । उनीहरुलाई चारकरोड अनियमितता गरेको आरोप छ ।
जिल्ला अदालत दोलखाका कर्मचारी अर्जुनप्रसाद रिमालका अनुसार तत्कालका प्रमाणबाट निज प्रतिवादीहरुले विगो चार करोड रुपैयाँ ठगी गरेको भन्ने कुराबाट कसुरदार होइनन् भन्ने नखुलेकालेपछि प्रमाण बुभ्mदै जाँदा कसुरको प्रकृति हेरी ठगीको महल ४/५ वमोजिम पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको हुँदा हाललाई मुलुकी ऐन अदालती बन्दावस्ती महलको ११८ (५) बमोजिम धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको जानकारी दिए ।
सोही अभियोगमा सहकारीका व्यवस्थापक माधवप्रसाद दाहाल सहित ४ जनालाई जेठ ७ गते जिल्ला न्यायाधीश श्रेष्ठकै आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेका थिए । मुख्य अभियुक्त सामान्य धरौटीमा छाड्ने तर सामान्य कर्मचारीलाई पुर्पक्षमा पठाउने आदेशले स्थानीय सर्वसाधारणहरु भने आश्चर्यमा परेका छन् ।
सहकारीका व्यवस्थापक माधवप्रसाद दाहाल र कर्मचारी इन्दिरा कार्कीलाई बैशाख १२ गते र ऋण उप समितिका सदस्यहरु रमेशकुमार दाहाल र जुना मिजारलाई बैशाख १६ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उक्त चार जनालाई जेठ ७ गतेको जिल्ला अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षमा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन जान पाउने नियम बमोजिम ४ जना पुनरावेदन अदालत पुगेका थिए । पुनरावेदन अदालत पाटनले असार २४ गते व्यवस्थापक माधवप्रसाद दाहाललाई जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो भने कर्मचारी इन्दिरा कार्कीलाई १ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो । ऋण उपसमितिका सदस्यद्वय दाहाल र मिजार जनही ५ लाख धरौटीमा तारेखमा रिहा भएका थिए ।
वचतकर्ता बाल कुमार दहाल, पोष्ट बहादुर दहाल, भुवन कुमार घिमिरेलगायतले ठगीको जाहेरी दर्ता गराएपछि कार्वाही अघि बढेको थियो । कार्यसमितिमा जानकारी तथा निर्णय नै नगराई गोप्य रुपले चार करोड रुपैयाँ विनाधितो लगानी गरेको देखिएपछि सञ्चालक समितिले अध्यक्ष, सचिव र व्यवस्थापक तिनै जनालाई निलम्बन गरेको थियो । प्रक्रिया मिचेर ४ करोड ऋण लगानी गरेको आरोप लागे तापनि हाल ऋण असुल भइसकेको सहकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कसरी भयो ऋण लगानी ?
ऋण लिन दुवै ऋणीलाई ऋणीकै गाडीमा अध्यक्ष माधव आफैँ काठमाडौँबाट आएका थिए । गत माघ १५ गते करिब एक घण्टाभित्र सबै कागजात तयार पारेर ऋणको बैंक चेक लिएर अध्यक्ष र ऋणीहरु सबै पुनः काठमाडौँ फर्किएको एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
यति ठूलो ऋण प्रक्रिया पूरा नगरी दिँदा अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर व्यवस्थापकले सही गर्न मानेका थिएनन् ती कर्मचारीले भने तर अध्यक्ष स्वयम् जिम्मा हुन्छु भनेपछि किन नदिने भनेर सचिबले हप्काएपछि व्यवस्थापकले बाध्य भएर सही गरे । फरार अधियुक्त अदालतमा हाजिर भएपछि कर्मचारीले तयार गरेको कागजमा बिश्वास गरेर सही गरेको झुटा बयान दिएको सहकारीका एक कर्मचारीले दिए ।
सहकारीमा माधबप्रसाद दाहाल अध्यक्ष र उनका सहोदर दाजु कृष्णप्रसाद दाहाल सचिब छन् । संस्थामा अध्यक्ष र सचिब दुवै कार्यकारी भएर मासिक तलब समेत नियमित बुझ्ने गरेका छन् । सहकारी नियम अनुसार सञ्चालकले तलब लिन नपाउने भए तापनि जनमुखीमा नियमित कर्मचारीका रुपमा सचिव मासिक १६ हजार ५ सय र अध्यक्ष १३ हजार २ सय तलब लिने गरेका छन् । ऋण उपसमितिको संयोजक समेत कृष्णप्रसाद दाहाल नै हुन् । अध्यक्ष दाहाल कृषि विकास बैंक, जावालाखेल शाखाका कर्मचारी हुन् ।
अदालत र मालपोत रातीसम्म खुल्ला
सामान्यतया कार्यालय विहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म खुल्छ । तर सेवाग्राहीको चाप नियमित भए ५ बजेपछिसम्म सेवा सुचारु हुन्छ । तर दोलखा जिल्ला अदालत र मालपोत कार्यालय चरिकोट बुधबार राती १० बजेसम्म खुलेका थिए ।
जिल्ला अदालतको आदेश साँढे ७ बजे आएपछि दाहालद्वयको धरौटी बापतको मूल्याङ्कनका लागि भन्दै बन्द भएको मालपोत राती ८ बजे खुलेको थियो । मालपोत कार्यालय मूल्याङ्कनका लागि राती साँढे ९ बजे सकेर चलानी नं. ६४ को पत्र बनाएर जिल्ला अदालत पठाएको उल्लेख छ ।
मालपोतको मूल्याङ्कन आएपछि जिल्ला अदालत राती १० बजे धरौटी लिएको थियो । जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीले अधिवक्ताहरुको अनुरोधमा रातीसम्म काम गर्नुपरेको बताए ।
रातीसम्म काम गरेपछि जिल्ला न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठ र प्रमुख मालपोत अधिकृत दिपेन्द्र काफ्ले बिहिबार बिहानै काठमाडौं पुगेका छन् । अदालतका श्रेष्तेदार कुलप्रसाद दाहाल बुधबार दिउँसै काठमाडौँ गएका थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठ बुधबार दिउँसो मात्र काठमाडौंबाट चरिकोट आएका थिए ।